Wararka - RMB ayaa qiimeysay in ka badan 8% marka loo eego doolarka Mareykanka muddo nus sano ah, shirkadaha ganacsiga shisheeye waxay qaadeen tallaabooyin badan si looga fogaado halista sarifka lacagaha qalaad
Naga soo wac: 0086-18758885818
jiinyeer bir ah
jiinyeer ilko caadi ah
jiinyeer ilkaha hadhuudhka
jiinyeer ilko isku eg
jiinyeer ilkaha kalluunka
Albaabka ilkaha ee Aluminium
jiinyeer caag ah
jiinyeer ilko firfircoon
jiinyeer ilko laba jibbaaran
jillaab ilkaha jiinyeer
jiinyeer ilkaha sii xoogeystay
Shiinaha jiinyeer ilko-derbi weyn
jiinyeer ilkaha wadnaha
jiinyeer ilkaha qalfoof
Jiinyeer bir ah oo ku dayashada ah
saddexagalka ilkaha jiinyeer
Afka saddexagalka ilkaha siibada
alifbeetada ilkaha jiinyeer
Jiinyeer aan muuqan
Kudayashada jiinyeer bireedka birta ah
Ilkaha nylon leh dun midab leh
jiinyeer caadi nylon
Sibidh olol celiya
Jiinyeer aan biyuhu lahayn
Heerkulka sare jiinyeer u adkaysta
Jiinyeer dib loo isticmaali karo
Soo Bandhigida Alaabada
RMB ayaa qiimeysay in kabadan 8% marka loo eego doolarka Mareykanka nus sano, shirkadaha ganacsiga ajaanibta ayaa qaaday talaabooyin badan si looga fogaado halista sarifka lacagaha qalaad
Laga soo bilaabo heerka hoose dhamaadka Maajo ilaa hadda, sicirka sarrifka RMB wuu soo kabsaday dhammaantiis wuxuuna dhowaan gaadhay qiyaastii 6.5, isagoo galaya "6.5 eras". Heerka dhexe ee sinnaanta ee yuan ayaa fududeysay 27 dhibic oo saldhig u ah 6.5782 oo ka dhan ah Mareykanka dollar bishii Nofeembar 30, xogta laga helay Nidaamka Ganacsiga Sarrifka Dibadda ee Shiinaha ayaa muujiyay. Iyada oo ku saleysan May 27 hooseeya ee 7.1775, yuan ayaa qiimeeyay 8.3% illaa iyo hadda.
Waxqabadka ugu dambeeyay ee RMB, Baarayaasha Machadka Cilmi-baarista ee Bangiga Shiinaha waxay rumaysan yihiin in sababaha ugu waaweyn ay yihiin laba: marka hore, saxiixa RCEP wuxuu keenay war wanaagsan, is-dhexgalka gobolka Aasiya iyo Baasifigga waa la sii dallacsiiyay, kaas oo gacan ka geysanaya kor u qaadista kobaca ganacsiga dhoofinta Shiinaha iyo soo kabashada dhaqaalaha; Dhinaca kale, daciifnimada sii socota ee doolarka Mareykanka, ayaa mar kale hoos ugu dhacday qiyaastii 92.2. Toddobaadkii la soo dhaafay, hoos u dhacu wuxuu gaadhay 0.8%, taas oo riixday qiimihii badnaa ee sicirka sarrifka RMB.
Si kastaba ha noqotee, shirkadaha ganacsiga ajaanibta, qadarinta RMB waa qof ku faraxsan qof walwal. Marka lacagta wadanku ay kor u kacdo, qiimaha waxsoosaarka badeecadaha la dhoofiyo waa la dhimi doonaa, badeecadaha dibedda laga keenana way jaban doonaan Sidaa darteed, waa faa'iido in la soo dejiyo shirkadaha, laakiin saameynta ay ku leedahay soo-dejinta soo dejinta iyo dib-u-dhoofinta shirkadaha waa mid xadidan, halka saameynta ay ku leeyihiin shirkadaha wax dhoofinta ay ka badan tahay. Shirkadaha ganacsiga ajaanibta ah, marka lagu daro shaqaalaha maaliyadeed waxay u baahan yihiin inay go'aan ka gaaraan mustaqbalka isbeddelka sarrifka, sidoo kale waxaa aad muhiim u ah in la doorto aaladaha dedan ee halista sicirka sarrifka sida xulashooyinka iyo horay loo socdo.